मोरङमा प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या | रेडियो झापा 100.7 MHz.
मोरङमा प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, मंसिर २३, २०७७ १२:५८:००
मोरङ – मोरङको मिक्लाजुंगमा एकजना शिक्षकको हत्या भएको छ ।
बिहान ५ बजे पहिचान नखुलेको समूहले मोरङको मिक्लाजुङ-१ रमितेको बर्खेमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सरला राईले जानकारी दिनुभयो । ६-७ जनाको समूहमा आएका मानिसहरुले शिक्षक श्रेष्ठको हत्या गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हातहतियारसहित आएको समूहले शिक्षक श्रेष्ठलाई गोली प्रहार गरेको स्थानीय बासिन्दालाई उद्धृत गर्दै उपप्रमुख राईले बताउनुभयो । बिहान भएको घटनापछि गएको प्रहरी टोली दिउँसो १२ बजेसम्म पनि घटनास्थलमा पुगेको छैन । घटनास्थल मोरङको दुर्गम बस्तीमा पर्छ ।
घटनास्थल पुग्न रमितेखोलाबाट हिँडेर ३ देखि ४ घण्टा लाग्छ । घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि मात्रै थप जानकारी आउने मोरङ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले बताउनुभयो । शिक्षक श्रेष्ठको विप्लव समूहले हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।